?????? / CBD ရေနံ - ဆေးခြောက်အဆီ
2 ?????????????????????????????? ???????5??? 5.00 ?????????????????????
75mg CBD နှင့် 45mg melatonin နှင့်အတူ 30 ml ကိုအရည်
လျှောက်လွှာ ၆၀ အတွက်လုံလောက်သည်
ထံမှကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ် CBD အော်ဂဲနစ်လျှော် 100%
ထူးခြားတဲ့ liposomal ပုံသေနည်း
သက်သတ်လွတ် & gluten- အခမဲ့
CBD Mani Drops - Nordic Oil ????????
???????????????? CBD BALMS CBD ဆေးတောင့် CBD အလှကုန်ပစ္စည်း CBD ခရင်မ် CBD အခြေခံမူ CBD Elixir သွားဖုံး CBD EXTRACTS အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက် CBD cbd mani nordic oil CBD Oil – Cannabis Oil CBD ရေနံ e- အရည် cdd-drop mani drops nordic oil Nordic cosmetics Nordic Cosmetics Eye Cream ategorရာဝတီ
၄ င်းတို့သည် gluten free၊ သက်သတ်လွတ်စားသူများဖြစ်ပြီးအတုကာလတာရှည်များနှင့်ဆိုးဆေးများမပါ ၀ င်ပါ။
ကျန်းမာသောအိပ်စက်ခြင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အိပ်စက်ခြင်းသံသရာအတွင်းပုံမှန်အားဖြင့်ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ပေါ်နေသောအလင်းနှင့်နက်ရှိုင်းသောအိပ်စက်ခြင်းအဆင့်များတွင် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုအကြိမ်ရေလည်းကွဲပြားသည်။ ဤအချိန်အတောအတွင်းသင်ယူခဲ့ရာများကိုသိမ်းဆည်းထားပြီးနေ့၏အတွေ့အကြုံများနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုများကိုလုပ်ဆောင်သည်။ ညအချိန်တွင်ထုတ်ပေးသောကြီးထွားမှုဟော်မုန်းသည်ပျက်စီးသွားသောတစ်ရှူးများပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်သေချာစေသည်။ ၎င်းသည်ပထမ ဦး ဆုံးနက်ရှိုင်းသောနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ၎င်းကိုအဓိကအိပ်စက်ခြင်းဟုခေါ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤနေရာတွင် ဦး နှောက်၏အရေးကြီးဆုံးပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်မှုများဖြစ်ပေါ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Melatonin သည်အဓိကအားဖြင့်အိပ်စက်ခြင်းကိုဖြစ်စေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ၎င်းကိုအိပ်စက်ခြင်း (သို့) ညဥ့်ဟော်မုန်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ သွေးထဲတွင်ဤဟော်မုန်း၏တိုးပွားလာသောအာရုံစူးစိုက်မှုသည်ခန္ဓာကိုယ်၏အနားယူရာအဆင့်ကိုစတင်သည်။ ညနေခင်းတွင်အလင်းရောင်ပြင်းထန်လာခြင်းက melatonin ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။ အကယ်၍ အလင်း၏လုပ်ဆောင်မှုကိုကာလရှည်ကြာစွာထားခဲ့ပါက၎င်းသည်မယ်လတိုနင်ထုတ်လုပ်မှုကိုတားဆီးနိုင်သည်။ ညနေခင်းတွင်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်နာရီပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်သောအခါဤအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ခံစားရသည်။ အချိန်ဇုန်များအနှံ့အပြားတွင်အလုပ်များသို့မဟုတ်လေယာဉ်ခရီးသွားခြင်းသည်လူသိများသောဂျက်လေရာ (ဆိုလိုသည်မှာ Melatonin ထုတ်လုပ်မှုနှောင့်နှေးခြင်း) ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ကျယ်ပြန့် Spectrum Hemp ထုတ်ယူ
မည်သည့်ဖြည့်စွက်မှုမျိုးမဆိုကဲ့သို့သင်ကိုယ်ဝန်၊ သူနာပြု၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေရှိပါသလားသို့မဟုတ်သံသယရှိပါကသို့မဟုတ်မည်သည့်ဆေးဝါးကိုမဆိုသောက်သုံးပါကအသုံးမပြုမီဆရာဝန်နှင့်စကားပြောပါ။
CBD Mani Drops – Nordic Oil ?????4???????????????????
Lena - 10. ??? 2020
Nikolaj K - 10. ??? 2020
မာရီယာ - 31. ??????? 2020
Linda - 31. ??????? 2020
CBD ကမ်းလှမ်းချက်: CBD 20% ရေနံ 3FOR2
CBD ကမ်းလှမ်းချက်: CBD 15% ရေနံ (Curcumin) 3FOR2
CBD ကမ်းလှမ်းချက်: CBD 15% ရေနံ 3FOR2
Nordic CBD ဆီအပြည့်အ ၀ ရောင်စဉ်တန်း (5% / 500mg)